Qaban qaabiyaha faneed Eduardo Cardenas oo la shaqeynaya dhalinyarada xaafadaha si ay u arkaan una dhisaan naqshad u taagan horumarka bulshada.
Qeybta:Ogaysiiska5 min akhris
Xaashiyo Cusub oo loogu talagalay Fiber, Buug, iyo Farshaxanada ku-hawl-galka Bulshadda oo Dhawaan La Bilaabanayo
Bishii Maajo ee la soo dhaafay, guddiga McKnight Foundation ayaa oggolaaday in lagu daro saddex ka mid ah shuraakeyaasha cusub ee sii wadidda ballaarinta barnaamijka Farshaxanka Farshaxanka ee 'McKnight Artist Fellowships' si loogu daro isbarbar dhiga fanaaniinta fiber, farshaxannada buugga, iyo farshaxannada ku howlan bulshada.
Wadashaqeyntaani cusub waxay soo bandhigi doontaa farshaxanimo muhiim ah iyo aqoonsi xirfadeed iyo fursado horumarineed oo farshaxan-yahanno daryeel-caafimaadeed oo dheeri ah oo ku nool kuna shaqeynaya Minnesota waxayna xoojin doonaan qaab dhismeedka taageerada waddooyinka xirfadda leh ee farshaxannada si ay khibraddooda iyo hal-abuurnimadooda ugu soo qaataan qaababkooda iyo goobahooda. Isbarbar dhigyadan cusub waxay sidoo kale ka tarjumayaan koboca socda ee hannaanka farshaxanka ee gobolka Minnesota iyo bulshooyinka kaladuwan ee dhaqamadooda iyo sheekooyinkooda si hal abuur leh loogu muujiyey fiber iyo dharka, iyada oo loo marayo hawlgelinta firfircoon ee xubnaha bulshada, iyo warbaahinta buugaagta iyo daabacaadda.
Haweenay waxay ku iftiimineysaa farshaxankeeda farshaxanka fiber-ka sheybaarka maqaarka dharka maqaarka. Dhibcaha Sawirka: Tracy Krumm
Walaalaha Farshaxanka Fiber
Dharka iyo agabka farshaxanka iyo fiber-ka ayaa ah qaab dhaqameed muuqaal abuur ah oo loogu talagalay dhaqammada daafaha dunida oo dhan, waxayna u sii ahaadaan sidii geesi geesinimo leh farshaxannada casriga ah ee Minnesota. The Xarunta Dharka wuxuu noqon doonaa lamaanaha maamulka cusub ee McKnight Fellowships for Farshaxanada Fiber. Waxaa la aasaasay 1994, Xarunta Dharka ayaa xarun u ah farshaxanka fiber-ka iyo guriga in kabadan 30 dhismayaal farshaxan oo ku yaal gobolka Minnesota. Xarunta Dharka ayaa maamuli doonta labo xirmo oo ah $ 25,000 midkiiba lacag aan xadidneyn oo loogu talagalay farshaxan-yaqaanada fiber-ka ee ku nool kana shaqeeya Minnesota sanad walba. Abaalmarintan lacageed ka sokow, saaxiibadood farshaxanka fiber-ka ayaa ka qeybqaadan doona bandhigyo ku yaal xarunta, shirarka farshaxanka fiber-ka qaran iyo munaasabado kale, booqashooyinka istuudiyaha, dhaleeceynta, iyo wadahadalka dadweynaha ee dhaleeceeyayaasha caanka ah iyo qaran-yaqaannada farshaxanka fiber. Saaxiibtinimada sidoo kale waxay marin u heli doonaan khibradaha shaqaalaha Xarunta Xarunta Dharka iyo shabakadaha, dukaannada tafaariiqda, sheybaarka farshaxanka ee gobolka, iyo maktabadda in kabadan 3000 oo buugaag iyo xilliyo.
"Farshaxanka Farshaxanka McKnight wuxuu kordhinayaa fursadaha sahaminta, xasilloonida dhaqaale, iyo awooda waxsoosaarka ee farshaxanada iyadoo la siinayo abaalmarinno lacageed oo aan xadidneyn iyo fursadaha horumarinta farshaxanka iyo farshaxanka ee farshaxano-dhaqameedka Minnesota." XARUNTA CAAFIMAADKA EE BARNAAMIJKA, BAABUURKA BARNAAMIJKA ARDAYGA IYO MAGAALADA ARTIST SHIRKADAHA
Abaalmarinta buugaagta Artist 2019 ee Jody Williams waxay muujineysaa fasal xirfadeeda adag ee isku xirnaanta. Buundada Sawirka: Xarunta Center for Arts Arts
Xusuus-qorka loogu talagalay Fannaaniinta Buugga
Sida sheekooyinku u jiraan, buugaag ayaa loo sameeyay iyada oo la adeegsanayo farsamooyin qarniyaal kala duwan ah, mararka qaarna la qaadanayo qaabab kala duwan iyo qaabab isdhaafsi baahsan sida ay taariikhda u dhigeen, u dabaaldegeen guulo, iyo la wadaago wadaagis iyo aqoon shaqsiyeed. The Xarunta Maktabada Minnesota (MCBA) waxay noqon doontaa lammaanaha maamulka cusub ee barnaamijka 'McKnight Fellowships for Art Arts'. MCBA waa hay'adda u adeegta aasaasiga ah ee farshaxanada ugaarsiga agabka suugaanta, nuxurka fikradda, iyo walxaha qaab-dhismeedka u soo bandhigi kara sida sawirka, rakibaadda, ama waxqabadka. MCBA waxay maamuli doontaa labo $ 25,000 oo laxiriira oo laxiriira farshaxanada buugaagta daryeelka ee kunool kana shaqeeya Minnesota sanad walbo. Marka lagu daro abaalmarinta lacageed, saaxiibbada farshaxanka buugaagta ayaa qaabayn doona khibradooda horumarinta xirfadeed waxayna kaqeybqaadan doonaan shirarka qaran, booqashooyinka istuudiyaha, iyo doodaha dadweynaha ee la kulma dhaleeceeyayaasha iyada oo qayb ka ah bandhiga sanadlaha ah ee daabacan iyo bandhig farshaxanka ee MCBA. Iyaga oo ay weheliso xubin ka noqoshada iskaashatada, asxaabtu waxay heli doonaan tilmaamo gaar ah iyo taageero farsamo oo ay ka helaan qalabka iyo xarumaha MCBA.
Gabayaaga ayaa isugu soo ururay Gabayga iyo Pie Picnic oo uu soo saaray abwaan Molly Van Avery. Dhibcaha Sawirka: Bruce Silcox
Saaxiibtinimada Farshaxannada Ku-hawl-galka Bulshadda
Dhaqanka bulshada waxaa ku jira qaabab farshaxan oo si toos ah ugu hawl gala dadka meel si ay u abuuraan khibrado qeexaya dhaqanka isla markaana kiciya isbadal bulsheed. Golaha Masraxa ee Pillsbury House wuxuu noqon doonaa lammaanaha maamulka cusub ee Farshaxanada 'McKnight Fellowships' ee Farshaxanada Ku-hawl-galka bulshada. Tiyaatarka Guryaha ee Pillsbury waxaa la aasaasay 1992 isagoo ah mid ka mid ah rugaha dejinta oo ay ku yaalliin dalladda Bulshooyinka United Kingdom. Masraxa ayaa ku bilaabmay sidii hay'ad farshaxanimo xirfad leh oo u heellan dhaqanka guryaha dejinta abuurista farshaxanka iyadoo lala kaashanayo bulshada. Tiyaatarka Guryaha ee Pillsbury wuxuu maamuli doonaa laba wehel oo ah $ 25,000 midkiiba lacag aan xadidneyn oo loogu talo galay shaqaalaha farshaxan-yaqaannada ku howlan ka shaqeynta bulshada kuna nool Minnesota sanad walba. Abaalmarintan lacageed ka sokow, saaxiibbada ku hawlan ka-qaybgalka bulshada waxay heli doonaan taageero talo-bixin gaar ahaaneed oo xirfadeed iyo mashruuc horumarineed oo lagu kabayo ilaha iyo shabakadaha tiyaatarka waxayna kaqeybgalayaan wadahadallada dadweynaha ee xirfadlayaasha bulshada ee caanka ah. Waxay sidoo kale marin u heli doonaan lacagaha loogu talagalay bilowga mashaariicda cusub.
Farshaxanka Farshaxanka McKnight wuxuu kordhinayaa fursadaha sahaminta, xasilloonida dhaqaale, iyo awooda waxsoosaarka ee farshaxanada iyadoo la siinayo abaalmarino lacageed oo aan xadidneyn iyo fursadaha hormarinta farshaxanka iyo farshaxanka ee farshaxano-dhaqameedka Minnesota. Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay hadda la shaqeysaa 12 la-hawlgalayaal farshaxaneed gaar ah si ay u maareeyaan xiriiriyaasheeda farshaxanka, taasoo sii hurineysa dhaqanka iyo farshaxanka kala duwan ee Minnesota. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, booqo McKnight Artist Fellowships bogga guriga.
Mawduuca: Fanka & Dhaqanka, Macaamiisha Xayeysiinta ee McKnight